Dugsi hoose/dhexe | Samfunnskunnskap.no
Xog ku saabsan dugsiga hoose/dhexe
Carruurta oo dhami waxey xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho toban sanno ah. Carruurtu waxey fasalka koowaad bilaabaan sannadka ay lix sanno buuxiyaan.
Dhammaan carruurtu waxey xaq u leeyihiin waxbarasho ku haboon, ardayda u baahata caawino dheeraad ah, way helayaan.
Ardayda dugsiga hoose dhigata waxa laga qaadaa imtixaan qiimayn hadal iyo qoraal ah laakiin aan buundo lagu bixin.
Dhammaan aradayda dhigata dugsiga hoose/dhexe waxa loogu gudbiyaa si atomaatik ah fasalka xiga marka laga soo laabto fasaxa xagaaga. Sidani waxa ay u dhacdaa tii oo aan ku xidhnayn ilmaha natiijadiisii iskuulka. Ilma nam a dhigto isla fasal laba sannadood.
Aradayda dugsiga dhexe waxa la siiyaa buundooyin/darajo dhammaan maadooyinka. Buundooyinku waxay yihiin 1 ilaa 6, halka 1 ay tahay ta ugu hoosaysa, 6 na ay tahay ta ugu sarraysa.
Dugsiga hoose/dhexe waxa loo agaasimay si isku mid ah dalka oo dhan. Tusaale ahaan dhammaan 190 maalmood ayaa sannad kasta la dhigtaa iskuulka, laakiin siyaasiyiinta degmooyinka ayaa go’aamiya xilliyada ay ku beegayaan fasaxyada kala duwan.
Dhammaan ardayda waxa la siiyaa manhaj waxbarasho oo isku mid ah. Siyaasiyiinta golaha shacabka ayaa go’aamiya manhajkaas waxbarasho. Carruurta oo dhami waxey helaan waxbarasho isku mid ah iyada oo aan ku xidhnayn degmada uu ka deganyahay dalka.
Iskuulka wadajirka (fellesskolen)
Sharciga waxbarashadu wuxuu sheegayaa in ardayda oo dhami, iyadoon loo eegin kartidooda iyo sida laga filanayo waxay xaq u leeyihiin inay ka helaan waxbarasho ku haboon iskuulka ay ka tirsan yihiin. Waana mabda’ siyaasiyan ah oo lagu magacaabo iskuulka wadajirka.
Maalgelinta dugsiyada hoose/dhexe
Waxbarashada dugsiga hoose/dhexe waa u bilaash ardayda iyo waalidka. Ardaydu waxay ka amaahdan karaan buugaagta waxbarashada iskuulkooda. Waxa kale oo la siinayaa buugaagta wax lagu qoro, qalimaantaa wax lagu qoro iwm.
Dawladda ayaa bixineysa kharashyada oo dhan. Kharashyada ugu badani wuxay ku baxaan mushaharka macalimiinta, dhisida iyo hawlaha dhismayaasha dugsiga.
Iskuuladda dawlada waxa soo raaca in ay jiraan iskuullo gaar loo leeyahay. Qiyaastii 2,5 boqolkiiba carruurta Norwey joogta ayaa dhigta iskuulada gaarka loo leeyahay. Dugsiyada gaarka loo leeyahey waalidiinta ayaa bixisa lacagta iskuulka. Lacagtaasi waa qaybta kugu soo hagaagta, halka dawladdu ay bixiso inta kale ee boosku qiime ahaan joogto.
SFO – Nidaamka-firaaqada ee iskuulka ama AKS – iskuulka-firfircoonigelinta
Dhammaan degmooyinka, marka laga reebo Oslo waxa loogu yeedhaa Nidaamka-firaaqada ee iskuulka(SFO). Oslo magaca isla adeegaasi waa iskuulka-firfircoonigelinta (AKS)
Dhammaan degmooyinku waxay u hayaan fursad ah (SFO) ama (AKS) ardayda fasalada laga bilaabo 1aad – 4aad
SFO/AKS waa fursad ikhtiyaar leh oo la siiyo qoysaska u baahan caawimo loogu ilaaliyo carruurta ka hor iyo ka dib xilliga caadiga ah waqtiga iskuulka, tusaale ahaan sababtoo ah waalidka oo shaqaynaya.
Ma aha fursad waxbarid, Laakiin carruurtu way ka heli karaan in casharada laga caawiyo halkan.
Ma aha lacag la’aan in carruuri kuu tagto SFO/AKS. Waalidku wax ay bixinayaan qaybtooda bil kasta, se inta hadhay qiimaha booska yahay waxa bixinaysa dawladda. Qaybta aaad bixinaysaa way kala duwan tahay degmooyinka. Degmooyinka qaar qoysaska dakhligoodu yar yahay waxay codsan karaan in laga dhimo inta ay bixinayaan, halka ay qaar kale isku qiime yihiin dhammaan, dakhligoodu inta uu doono ha ahaadee. Degmooyinka qaar ayaa qiime dhimis bixiya haddii carruur kale kuu tagto isla nidaamkaas, qaar kalena ma bixiyaan.
Macalimiinta looma oggola in ay isticmaalaan wax xadgudub ah noocnaba oo ay ardayda u geystaan. Anshaxa iskuulka waxa lagu socodsiinayaa qaab u cuntamada ilmaha qiimihiisa dadnimo. Macalimiintu ha tusaan ardayda ixtiraam, ardayduna ha tusaan ixtiraam macalimiinta.